Job 35 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Elaịhu gosiri na ihe Job na-ekwu ekwesịghị ekwesị (1-16)
Job sịrị na ya bụ onye ezi omume karịa Chineke (2)
Chineke nọ n’eluigwe, e nweghị ihe mmehie na-eme ya (5, 6)
Job kwesịrị ichere Chineke (14)
35 Elaịhu kwukwara, sị: 2 “Obi ò siri gị nnọọ ike na ị bụ onye ezi omume nke na ị na-asị,‘Abụ m onye ezi omume karịa Chineke’?+ 3 N’ihi na ị na-asị, ‘Ọ bụrụ na m na-eme ihe dị mma, olee otú o si gbasa gị?* Ihe ọ̀ gaara akara m mma ma a sị na m mere mmehie?’+ 4 M ga-asa gị okwu,Saakwa ndị enyi gị+ gị na ha nọ. 5 Lelie anya n’eluigwe ka ị hụ,Leruo ígwé ojii nke dị ezigbo elu karịa gị anya.+ 6 I mee mmehie, è nwere ihe i metere Chineke?+ Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọjọọ ọtụtụ ugboro, olee ihe i metere ya?+ 7 Ọ bụrụ na ị bụ onye ezi omume, gịnị ka ị na-enye ya? Gịnị ka ọ na-enweta n’aka gị?+ 8 Ọ bụ naanị mmadụ ibe gị ka ihe ọjọọ ị na-eme gbasara,Ọ bụkwa mmadụ ka ezi omume ị na-eme na-abara uru. 9 Ndị mmadụ na-ebe ákwá ka e nyere ha aka mgbe a na-emegbu ha. Ha na-ebe ákwá ka a napụta ha n’aka ndị dike na-achị ha.+ 10 Ma e nweghị onye na-ajụ, sị, ‘Olee ebe Chineke, bụ́ Onye Ukwu kere m, nọ,+Onye na-eme ka ndị mmadụ na-abụ abụ otuto n’abalị?’+ 11 Ọ na-akụziri anyị ihe+ ka anyị wee mara ihe karịa anụ ọhịa,+Ọ na-emekwa ka anyị mara ihe karịa ụmụ nnụnụ. 12 Ndị mmadụ na-ebe ákwá ka e nyere ha aka, ma ọ naghị aza,+N’ihi na ndị na-eme ihe ọjọọ dị mpako.+ 13 N’eziokwu, Chineke anaghị anụ ákwá aghụghọ.+ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile enweghị ihe o ji ya kpọrọ, 14 Ma ya fọdụzie mgbe ị na-asị na ị naghị ahụ ihe ọ na-eme.+ Ikpe gị dị n’aka ya. N’ihi ya, i kwesịrị ichere ya.+ 15 N’ihi na o jibeghị iwe kpọọ gị ka ị zaa ya ajụjụ. O tinyebeghị uche n’ọnụ ị na-agbakasịrị ya.+ 16 Job na-emeghe ọnụ ya na nkịtị. Ọ na-ekwu ọtụtụ okwu n’agbanyeghị na e nweghị ihe ọ ma.”+
^ O nwere ike ịbụ Chineke ka ọ na-agwa.